Tamin’ny taona 2000 no nikasa voalohany hanome fanampiana ireo malala-tanana tsy miankina, handray anjara mavitrika amin’ny fampivoarana ireo fianakaviana maromaro izay azo lazaina fa tsy misy mpiahy na tsy manan-kantenaina eto amin’ny faritra Fitroafana, Madagasikara
Mba hisian’izany fampivoarana izany eo amin’ny lafiny eto amin’ny “Kartie” na “Faritra”, dia hifa fa ara-dalana sy araka ny tokony ho izy tokoa ny nanome fanampiana eny fa na dia tsy dia maro aza ho an’ireo fianakaviana izay hita fa tena mila izany.
Tsotra ny nisafidianana azy ireo :fianakaviana tsy manan-dray, renim-pianakaviana tsy manana fidiram-bola raikitra izany hoe tsy an’asa, ankizy tsy misy saram-pianarana na koa tsy misy mpiantoka raikitra.
Noho izany, ireo renim-pianakaviana izay ao anatin’ny fikambanana dia tsy maintsy manaiky ireo fepetra sy fifampifehezana voalaza teo aloha ary ho fanampin’izany dia tokony hampiseho ihany koa izy ireo fahavononana feno mba hisian’ny faharetana eo amin’ny fanampiana fandraisana tanana ny mombamomba azy ireo.
Ny tanjona tokana dia manolotra ho an’ireo ankizy ny tombotsoa rehetra amin’ny lafiny fanabeazana sy fampianarana mba hahatonga azy ireo ho tafavoaka amin’izao toerana misy azy amin’izao fotoana izao, izay hita tokoa fa tena sarotra.
Ankoatra izany, izy ireo izany hoe ireo Renim-pianakaviana, dia homena asa izay handraisan’izy ireo karama, ny saram-pianaran’ny ankizy dia iandraiketan’ny Fikambanana ary misy fanampiana manokana ho azy ireo eo amin’ny lafiny fitafiana: bodofotsy sy firakotra sy izay rehetra mifanaraka amin’ny fiveloman’izy ireo.
Fanampin’ireo dia afaka mandray anjara mivantana amin’ny toerana fisakafoanana na “Cantine” raha toa ka tian’izy ireo izany.
Ary manana zo feno eo amin’ny lafiny fitsaboana azy sy ny ankohonana amin’ny dokoteram-panjakana izay mety ho mpitsabo ho an’ny fianakaviana raha ilaina.
Ny ankizy tsirairay dia araha-maso tanteraka eo amin’ny lafiny fampianarana sy fitarihana azy ireo araka ny tokony ho izy.
Izany rehetra izany dia mifototra betsaka amin’ny fahavononan’ny tsirairay hanatsara bebe kokoa ny fiainany hifanaraka amin’ny zavatra iainany.
Ny teny hoe “Fanaraha-maso” izany dia tsy tokony hipetraka mihintsy eo amin’ny fianakaviana tsirairay avy, fa adidin’ny Renim-pianakaviana
Ny manatanteraka antsakany sy andavany ny asa izay hanakaramana azy mba hiatrehany ny fiainanany andavan’andro, ary raha toa ka misy fitondran-tena mety hifanohitra amin’izany, ireo fifanarahana rehetra izay niraisan’izy ireo tamin’ireo “mpamatsy” dia mety ho rava sy ho tapaka avy hatrany.
Napetraka izao fepetra izao mba tsy hanoloana ny andraikitra sahan’ireo Reny sy ny adidin’izy ireo amin’ny maha Reny azy izay manana anjara lehibe tokoa eo amin’ny fampivoarana ny ankohonany.
Ny fototra iaingana izay mifehy ny asa sosialy dia, raha toa ny fiainan’ireo Reny ireo izay tsy mba manana ny ho enti-manana ho fiatrehana ny adidy samihafa ho fanatsarana ny ankohonany dia tsy tokony ho enta-mavesatra ihany koa izany ho an’ireo ankizy tsirairay izay azo lazaina fa tsy tompon’andraikitra velively amin’ny zava-misy izay iainany ankehitriny.
Arak’izany dia tokony hanolotra ny heriny rehetra izy ireo (Reny) mba hialan’ireo ankizy ireo izany lalan-tsarotra izay efa nodiavin’izy ireo izany. Ny fikambanana dia manome Tanana azy ireo mba hialana amin’izany fahasahiranana izany, izay tsy midika velively ny hanala ireo renim-pianakaviana amin’ny andraikitra izay sahaniny.
Nandritra ity taona ity dia miisa efatra ireo fikambanana izay nisotra anarana mba ho isan’ireo ao anatin’ny fanampiana, koa araka izany dia roa ambin’ny folo ireo ankizy izay tafiditra an-tsekoly.
Raha ny zava-misy amin’ny ankapobeny dia toy ny tsy misy io isa voalaza teo aloha io, kanefa, raha misy zaza iray izay mianatra mamaky teny sy manoratra, eny fa na dia iray ihany aza, dia azo lazaina fa zava-dehibe tokoa izany ary fahombiazana manoloana ny fahantrana sy ny fahasahiranana misy amin’izao fotoana.
Teo aloha - Manaraka>>